'राम्रो कथा भेट्नै मुश्किल' :: अशेष अधिकारी :: Setopati
अशेष अधिकारी काठमाडौं, साउन १९
तस्वीरहरू: निशा भण्डारी
अभिनेत्री रेखा थापासँग 'किस्मत'बाट डेब्यू भएपछि आर्यन सिग्देलले त्यतिबेला नेपाली फिल्मले खोजी गरिरहेको रोमान्टिक हिरोको परिभाषालाई सम्बोधन गर्‍यो। त्यसयता आफ्नो करियरमा उनले भिन्न भूमिकाहरूमा आफूलाई प्रमाणित गर्ने प्रयास गरेपनि आर्यनको रोमान्टिक अवतार दर्शकलाई प्रिय छ।
शुक्रबारबाट उनी अभिनित एवं निर्मित प्रेमकथा 'कायरा' रिलिज भएको छ। फिल्म प्रचारको रस्साकस्सीबीच लाजिम्पाटमा फिल्मकी हिरोइन साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहसँग भेटिएका आर्यन फिल्मलाई लिएर उत्साहित देखिन्थे।
यस फिल्मको कथा उनी आफैलें लेखेका हुन्। त्यसैले उनी र साम्राज्ञीसँगको भलाकुसारीको पहिलो प्रश्न हामीले आर्यनलाई सोझ्यायौं, 'फिल्मको कथा कसरी दिमागमा आयो?'
'भित्र जति नै पीडा भएपनि धेरैजसो मानिसहरू त्यसलाई लुकाएर बाहिर केहि नभएजस्तो गर्छौ। त्यस्तै सबै मानिसको मनभित्र एउटा गहिरो इच्छा रहेको हुन्छ। जसलाई पूरा गर्ने सबैको चाहना हुन्छ। यिनै दुई चिजबाट सिनेमाको कथा आएको हो', उनले भने।
यसमा फिल्मका निर्देशक लक्ष्मण रिजालको 'इनपुट' पनि उत्तिकै छ। रिजाल र सिग्देल दुबै सँगै फिल्म बनाउने योजनामा थिए तर भनेजस्तो कथा भेटिइरहेको थिएन।
कुरैकुरामा आर्यनले 'कथा नै छैन बनाउने भनेर मात्र के गर्नु?' भने पछि रिजालले आर्यनलाई एउटा लाइन सुनाए जुन फिल्ममा संवादका रूपमा पनि राखिएको छ।
'तिमीसँगै थियौं सम्बन्ध देखिन, तिमीसँगै थिएनौं, एक्लो भए सम्बन्ध देखें तर तिमीलाई देखिन।'
आर्यनले यस संवादमा आफ्नो सोच मिलेको देखें र भने, 'ल! म सँग कन्सेप्ट छ।'
दुबैको कुरा मिल्यो फिल्म अगाडी बढ्यो।
दोश्रो फिल्म 'ए मेरो हजुर २'को प्रचारका क्रममा उही खाले भुमिका आएर फिल्म गर्ने-नगर्ने दोधार परिरहेको गुनासो साम्राज्ञीको थियो। 'कायरा' उनको चौथो फिल्म हो। संयोगले यो चारौं फिल्म पनि प्रेमकथा।
त्यसैले आर्यनको कुरालाई ध्यान दिएर सुनिरहेकी साम्राज्ञीलाई हामीले सोध्यौं, 'तपाईलाई फिल्मको के कुराले ओके गरायो?'
छोटो पहेंलो वानपिसमा खुलेकी साम्राज्ञीले प्रेमकथा भएपनि फिल्मको कथा मनपरेकोले छोड्न नसकेको बताइन्।
'यो फिल्मको कथा एकदमै बलियो छ। एकदमै रोमान्टिक र गहिरो। पछिल्ला तीन फिल्मका कारण मलाई पनि धेरैले एउटै खाले फिल्म गर्‍यो भनेर भनिरहनु भएको थियो। हुन पनि मलाई उस्तै खाले स्क्रिप्टहरू आइरहेका थिए। आर्यन दाइको स्क्रिप्ट पनि मैले सुनौ न त, के थाहा मैले खोजेजस्तै होकी भनेर सुनें। सुनेपछि मलाई कथा एकदमै बलियो र गहिरो लाग्यो । यसले दुई परिपक्व पात्रको कथा भन्छ, त्यो राम्रो लाग्यो।'
साम्राज्ञीले फिल्म गर्नुमा अर्को एक कारणले मुख्य काम गरेको बताउँछिन् जसलाई उनले गोप्य राखिन्, 'यसमा अर्को मुख्य कुरा छ, जसलाई भन्न म असमर्थ छु। यसका लागि फिल्म हेर्नुपर्छ।'
'मैले कहिल्यै पनि आफ्ना लागि सिनेमा बनाइन। मैले सँधै दर्शकका लागि बनाएँ।'
'आफ्नै फिल्म दर्शकका रूपमा हेर्दा कस्तो लाग्यो?' भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनेक्रममा आर्यनले भने, 'कोहीलाई फिक्स जनराको फिल्म मात्र मनपर्छ भने त कुरै अर्को भयो तर लभस्टोरी सिनेमाको पनि पारखी हो भन्ने 'कायरा' दर्शकलाई मनपर्छ', उनले थपे।
'मैले स्क्रिप्ट सुन्दा दर्शक नै बनेर सुनेको थिएँ। यसअघि कुनै पनि स्क्रिप्ट सुन्दा मलाई भित्रबाट छोएको थिएन। म सामान्य रूपमा ए ! राम्रो छ मात्र भन्थे। यसको कथाले मलाई भित्रैदेखि छोयो। मेरो मन भारी भएको थियो। मैले म साँच्चिकै त्यो अवस्थामा पुगेको अनुभव गरें।'
सोही प्रश्नमा साम्राज्ञीले जवाफ दिइन्।
फिल्मी करियरमा आर्यनलाई पनि अन्य अभिनेतालाई जस्तै उस्तै भूमिका गरेको आरोप लागेको छ। त्यसलाई उनले परिवर्तन गर्ने प्रयास नगरेका त होइनन् तर ती परिवर्तित अवतारमा दर्शकको रूचिमा परेन।
आर्यनले यस्तो जवाफ दिए।
'कलाकारका रूपमा मलाई फरक फरक सिनेमा गर्न मन लाग्छ तर मैले जति पनि प्रयोग गरें ती सफल भएनन्।केहि क्रिटिकल्ली सफल पनि नभएका होइनन तर हलमा दर्शक आउने मामिलामा म सफल भइन। त्यही भएर ब्याक टु लभस्टोरी जनरा।'
चौथो फिल्म रिलिज हुँदै गरेको अवस्थामा र रिलिजको तयारीमा रहेको 'इन्टु मिन्टु लन्डन'मा को ट्रेलरको कारण आर्यनको जस्तै आरोप साम्राज्ञीले पनि सुन्न थालिसकेकी छन्।
'सबै कलाकारको जीवनमा यस्तो उतारचढाव आउँछ। मेरो पनि ध्यान फरक सिनेमा गरू भन्ने हो तर फरक सिनेमाको प्रस्ताव नै नआएपछि आएकोबाट नै राम्रो छानेको हो', साम्राज्ञीले भनिन्।
साम्राज्ञीको जवाफ सुनेपछि आर्यनले उनलाई एक्सन अवतारमा हेर्न चाहेको इच्छा जाहेर गरें।
'मलाई 'द गर्ल वीथ दि ड्रागन ट्याटु' र 'माई वाइफ इज अ ग्याङस्टर' जस्ता भूमिका गर्न मन छ। तर यस्तो स्क्रिप्ट आउँदैन अनि स्क्रिप्टमा सँधै यस्तै तलमाथि भइराख्छ', आर्यनको कुरा सुनेर सुरूमा हाँसेकी साम्राज्ञीले गुनासो गरिन्।
उनीहरू दुबैले चाहाना हुँदाहुँदै पनि राम्रा कथा नलेखिनाले फरक गरूँ भन्ने चाहना पूरा नभइरहेको बताए। त्यस्तै राम्रो स्क्रिप्ट नहुँदा दर्शक भड्किने सम्भावना रहन्छ, त्यसमा पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्ने भनाइ राख्दै त्यसका लागि राम्रो मेकरसँग मात्र खतरा मोल्न सकिने समान धारणा दुबैको थियो।
अलिकति बढि पैसाको लागि जुनकुनै फिल्म खेल्ने कलाकारहरूमाथिको आरोपका बारेमा पनि हामीले आर्यन साम्राज्ञीको धारणा बुझ्ने प्रयास गर्‍यौं।
यसमा दुबैको बचाउ आर्यन एक्लैले गरें।
'त्यसरी फिल्म खेलेको आरोप ममा लागु हुन्न। यदि त्यस्तो हो भने त मसँगै आएकाहरूको फिल्मको संख्या एक-डेढ समय पुगेको छ, मेरो त ३०-३५ छ। उसले चाहेको भए यो अवधिमा उसको सिनेमाको संख्या यतिमात्र हुँदैनथियो होला? मैले अघि भनेजस्तै हामीलाई राम्रोबाट झन राम्रो छान्ने उस्तो सहुलियतपूर्ण अवस्था छैन्।'
नेपाली सिनेमाका चक्लेटी र रोमान्टिक हिरो आर्यनसँगको सहकार्य साम्राज्ञीका लागि सिकाइपूर्ण र फरक रह्यो। उनलाई आर्यन मनपर्यो। यसमा आर्यनको व्यक्तिगत र व्यावसायिक व्यवहारबाट उनी उत्तिकै प्रभावित छिन्।
'एकदमै व्यवसायिक, अरूको नीजि जीवनमा के हुन्छ? के छ? उहाँ चासो राख्नुहुन्न। म पनि त्यस्तै हुँ। अनुभवी भएकाले काम सिक्न पाएँ। यसअघि मैले नयाँ कलाकारसँग नै काम गरें, जसका कारण मैले उहाँहरूलाई सिकाउनुपर्थ्यो, यसपटक सिक्न पाएँ' उनले आर्यनको बारेमा भनिन्, 'एकदमै सजिलो भयो उहाँसँग काम गर्न।'
उनले आर्यनलाई 'रोमान्स किङ्ग'को उपाधि नै दिइन्।
'मैले आजसम्म नेपाली एक्टरमा रूदाँ पनि राम्रो देख्ने, रोमान्टिक सिन गर्दा पनि कस्तो लोभलाग्दो। मैले उहाँजस्तो एक्सप्रेसन् दिन सक्ने अर्को नेपाली एक्टर देखेको नै छैन्।'
साम्राज्ञीको 'रोमान्स किङ्' को उपाधि सुनेर मन्द मन्द मुस्कुराइरहेका आर्यनले साम्राज्ञीलाई 'नेक्सट नेपाली लेडी सुपरस्टार'को भनेर प्रशंसा गरे। हिरोइनहरूले कामका लागि कम तारिफ बटुल्छन् तर साम्राज्ञीले पहिलो फिल्मबाट थुप्रैको मन जितिन तर आर्यनको नजरमा साम्राज्ञीले अझै सिक्न बाँकी छ।
'ऊ आफ्नो कामप्रति धेरै गम्भिर छन् मलाई उनलाइ लिएर एउटै डर छ। त्यो भनेको उनको कामप्रतिको लगाव जुन किसिमको छ , त्यसमा कतै कमी हुने त होइन।अभिनेत्रीमा हुनुपर्ने सबै गुण उनीमा छ, बस कुनै कुराले उसको ध्यान अन्यत्र नमोडोस्।'
आर्यनको सुझाव साम्राज्ञीले गंभीर ढंगले लिएकी छन्।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन १९, २०७५, ०३:३३:००
डेढ वर्षमा ६ बालबालिकाको ज्यान लियो चितुवाले, जोगिन देउताको पूजा बोकाको बली
‘स्कुल बंक गरेर सिनेमा हेर्दा थुप्रैपटक पिटाइ खाएँ’
‘अफर गर्नै डर लाग्छ’
‘जत्ति नै जान्ने भए पनि फर्स्ट कि सेकेन्ड भन्ने डर हुन्छ नै’
'नेताहरूलाई अगाडि राखेर व्यंग्य गर्दा सन्तुष्टि हुन्छ'
‘घमण्ड गर्‍या होइन, म नेपालका कम कमजोर निर्देशकमा पर्छु होला’
‘के दसैं बनाएको यस्तो?’